Otú na-ekiri Hulu na ihe ọ bụla Popular TV Mfe
> Resource> Video> otú na-ekiri Hulu on TV
Ọ bụrụ na ị nwere smart TV, ọ ga-adị oké echiche iji strimụ Hulu fim na-egosi na telivishọn na nnukwu ihuenyo TV. Otú ọ dị, ọ bụrụ na gị TV adịghị nwere wuru na-ngwa maka Hulu, ị ka pụrụ ekiri Hulu on TV mfe na enyemaka nke oké Wondershare Video Ntụgharị (Video Converter Ultimate for Mac).
A na ngwa bụ enwe ike ibudata Hulu vidiyo na TV dakọtara formats maka ire ụtọ playback. Mara na ọ bụrụ na ị na ugbua nwere nza nke Hulu vidiyo na PC (ma ọ bụ vidiyo ọ bụla na isi mmalite ndị ọzọ) na chọrọ igwu ha na TV, ị ka chọrọ iji tọghata ha gị TV akwado formats. Nke ahụ bụ n'ihi na ọtụtụ nke videos na ahịa n'oge na-ekwekọghị na dị iche iche TV. Ok, ugbu a, ka m gosi gị otú na-ekiri Hulu on TV.
1 Download Hulu videos maka TV
Mbụ, download, wụnye na-agba ọsọ ngwa a. Mgbe ahụ, na-aga Hulu website na-ahụ videos ịchọrọ ibudata maka TV. Ke akpatre, laghachi a usoro si download interface. N'oge a, i nwere abụọ ụzọ dị iche iche ibudata Hulu videos n'ihi na gị TV.
Na otu onye bụ pịa Download akara ngosi na n'elu-nri akuku nke online Hulu video. Ndị ọzọ bụ pịa Add URL na nke a ngwa si download interface idetuo video URL n'ebe ahụ.
2 tọghata Hulu ka TV
Tupu ị malite converting Hulu videos maka TV, ị dị nnọọ mkpa iji mbubata ebudatara Hulu videos ka a na ngwa akakabarede ebi ndụ. Iji mee ya, dị nnọọ gaa Finished Ọbá akwụkwọ, nri pịa vidio ị chọrọ, ma họrọ "Tọghatara" nhọrọ.
Mgbe ahụ, na-aga mmepụta Format panel. Ebe a, ị nwere ike họrọ ihe ị chọrọ. Ọ bụrụ na gị TV bụ nke otu n'ime Samsung TV, Sony TV, LG TV na Panasonic TV, dị nnọọ aga Ngwaọrụ> TV, na mgbe ahụ, gị TV nlereanya. The format bụ ihe kasị mma n'ihi na gị TV.
N'ihi na Apple TV, ị nwere ike họrọ gị Apple TV nlereanya si Ngwaọrụ> Apple udi.
Na ala-nri akuku nke a usoro si window, i kwesịrị see tọghata bọtịnụ iji malite video akakabarede.
Mgbe akakabarede, chọta converted video faịlụ site na ịpị Open nchekwa bọtịnụ na ala nke a na window. Ke akpatre, nyefee video gị TV site a USB ngwaọrụ maka playback.
Olee otú Tinye Foto dị ka Music (MP3)